Ungachinja sei marongero eBIOS kubhoot Linux kubva Live CD / USB | Kubva kuLinux
Ungachinja sei marongero eBIOS kubhoot Linux kubva Live CD / USB
Imwe yematanho makuru kuve pindirana pakati pe vashandisi vasina ruzivo uye kushandiswa kwemamwe masisitimu anoshanda kazhinji ndiko kuiswa kweBIOS. Paso yakapusa asi kutsoropodza y zvinodiwa nokuti edza e instalar chero kugovera Linux.
1 Kazhinji kutaura
2 Maitiro ekupinda iyo BIOS yekumisikidza skrini
3 Gadzira iyo boot drive
4 Yakare BIOS
5 UEFI uye Yakachengeteka Boot
Kana iyo live-cd kana live-usb yewaunofarira distro yagadzirwa, inongosara yekumisikidza iyo BIOS kuitira kuti system bhutsu kubva kune inoenderana dhiraivha.
Sekutsanangurwa kupfupi, ngatitii kana uchitanga komputa, chinhu chekutanga chakatakurwa iBIOS (Basic Input / Output System), ine chinangwa chikuru kuita maitiro anoona kushanda chaiko kweiyo Hardware uye gare gare kurodha iyo inoshanda sisitimu. Mune mamwe mazwi, ndicho chidzitiro icho chaunoona pamberi pesisitimu yekushandisa isati yatanga kurodha (ingave Windows kana chero imwe).
Izvo zvatinofanirwa kuita kuyedza uye / kana kuisa Linux kupinza iyo BIOS yekumisikidza skrini uye uudze kuti pane kutanga iyo inoshanda sisitimu iyo yakaiswa pane yakaoma dhisiki, tanga iyo iri mune yedu yekurarama-cd kana live-usb, sezvazvingaite.
Maitiro ekupinda iyo BIOS yekumisikidza skrini
Nehurombo, hapana nzira yepasirese yekuzadzisa iri basa sezvo yega mamaboard modhi inouya neiyo chaiyo BIOS uye zvinogona kunge zvisingaite kunyora yakazara yakazara mamaneja ekugadzirisa. Nekudaro, kana tikazvibvumira kutakurirwa neiyo intuition, maitiro acho ari nyore.
Kuti uite izvi, kana iwe ukabatanidza iyo michina uye nekukurumidza kana yekutanga meseji ikatanga kuoneka, unogona kudzvanya iyo «Kumbomira» kiyi yekumisa bhuti maitiro uye uone zvinoonekwa pachiratidziro nechivimbo. Izvi zvinofanirwa kuitwa nekukasira nekuti mameseji ataurwa anoonekwa chete masekonzi mashoma.
Kana iwe usingakwanise kumisa maitiro ekutanga, tarisa nokungwarira pachiratidziro chekutanga. Pazasi pechidzitiro ichi panowanzove netambo yakafanana neiyi: «Dhinda F2 kuti upinde SETUP». Ehe, kiyi inogona kuve chero imwe. Anonyanya kuzivikanwa ndeaya: [DEL] kana [Del], [Isa], [Esc], [F2], [F1], [F10] kana chero kiyi yebasa.
Mamwe maBIOSes matsva anotenderawo kusarudza chimbo chekushandisa uchishandisa imwe kiyi, pasina kuwana iyo setup peji yeBIOS. Izvi zvinodaro nekuti kazhinji zvakajairika kugadzirisa izvi marongero uye nekuti izvi zvinotadzisa mushandisi kugadzira kumwe kuchinjwa nekutadza. Kana iyo BIOS iine iyi "nzira ipfupi", ingoshandisa iyo miseve yekhibhodi uye sarudza inoenderana bhuti kifaa.
Iyi "nzira ipfupi", zvakadaro, inoshanda chete kwekutanga kutanga; nguva inotevera iyo sisitimu yekushandisa yakaiswa pane hard disk ichatanga. Nekudaro, kudzokorora, kuita shanduko "zvachose", kana muchiitiko chekuti BIOS haina iyo "nzira pfupi" yambotaurwa, unofanirwa kudzvanya kiyi inoenderana kuti upinde iyo BIOS yekumisikidza skrini, inogona chakasiyana zvachose neicho chinoratidzwa pano, asi iine hunhu hwakafanana uye mabhenefiti.
Gadzira iyo boot drive
Apa ndipo patinogona kungopa chete madhairekitori, nekuti iyo BIOS yekumisikidza skrini inosiyana kubva pabhodhi kuenda kubhodhi. Nekudaro, mune zvakajairika mazwi, iwe unofanirwa kutsvaga iyo tabu yakafanana neiyo "Boot" kana mukova unonzi «Boot kuteedzana» kana «Boot pekutanga» mukati mezve yakawanda «general» tab yeiyo «Yepamberi BIOS Zvimiro» maitiro.
Panguva ino zvakakosha kuyeuka kuti apa ndipo pane iyo kuteedzana bhuti. Izvi zvinoreva kuti isu tichaisa cheni yezvinokosha: kutanga, kuti inoedza kubhuroka kubva ku cd kana iyo usb (zvinoenderana nekuti tinoda kuyedza sei distro yedu); kana izvo zvikatadza, zvinoedza kubhuroka kubva kune yekushandisa system yakaiswa pane hard drive, zvichingodaro.
Nzira yekusarudza ma tabo kana kushandura marongero akasiyana kwazvo. Dzimwe nguva inyaya yekungoshandisa miseve, dzimwe nguva iwe unofanirwa kushandisa PgUp uye PgDn makiyi, nezvimwe. Nekudaro, mukoramu kurudyi iwe unogara uchiwana tafura inotsanangura inoratidza matanho ekutevera. Pazasi, kune chikamu chayo, pinda makiyi ekutsikirira kuti uite mabasa akajairika. Ruzivo rwechirungu rweChirungu rwakakwana kuti unzwisise zvekuita.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, chengetedza shanduko dzako uye ubude purogiramu yekumisikidza. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kudzvanya inoenderana kiyi (mune iyo yapfuura skrini, F10).
Mamwe maBIOS akura haauye nerutsigiro rwekutora mota kubva ku USB drive. Muchiitiko ichocho, sarudzo yakanakisa inowanzo shandisa live-CD kuyedza yako yaunoda Linux distro. Nekudaro, zvakare zvinokwanisika kumanikidza bhuti kubva kuUSB (pasina inoenderana BIOS tsigiro yeiyi) uchishandisa PLOP Bhuti Maneja.
Zvimwewo, maBIOS akura haatombosanganisi rutsigiro rwekutora mota kubva kuCD-ROM drive. Muchiitiko ichocho, iyo yakasarudzika sarudzo ingangove yekushandisa bhutsu mafiripi, ayo chete mashoma Linux mini-distros wana. Neraki, kana muchina uine CD kuverenga, zvinokwanisika kubhuroka kubva kune live-cd, kunyangwe kana iyo BIOS isingatsigire, uchishandisa Smart Boot Maneja o PLOP Bhuti Maneja.
UEFI uye Yakachengeteka Boot
Ichi chikamu chinongosanganisira iwo matsva makomputa anouya neEFI akaisirwa kwete pane izvozvi "zvechinyakare" BIOS. Nezvekutaura, pamwe vese avo vanouya neWindows 8 kana kumusoro vane UEFI uye Yakachengeteka Boot inogoneswa nekutadza, nekuti izvi ndizvo akabvunza neMicrosoft kuitira kuti Hardware ive inosimbiswa.
Iyo Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ndeye tsananguro inotsvaga kutsiva iyo yekare interface yeBIOS, iyo kune vakawanda yaive zvakare "makumi masere" uye iine chimiro chakafanana kune yekare DOS. Uye zvakare, inosanganisa akati wandei maficha, izvo zvisiri izvo chinangwa chechinyorwa chino, pakati pazvo zvinonzi "safe boot" kana "safe boot" inomira
Yakachengeteka Boot inodzivirira komputa kubva kutanga iyo inoshanda system kana iyo boot loader isina chitupa chedigital chinoshanda, mhedzisiro yekumisidzana kuchinjaniswa kwekodhi yakaipa. Nenzira iyi, chero bootkit-mhando malware haizokwanisa kushanda nemazvo.
Zvisinei, chokwadi chekuti Microsoft yakamanikidza vagadziri kugovera makomputa avo nesarudzo iyi inogoneswa kuitira kuti vawane chitupa cheWindows 8 chakagadzirwa zvikuru kumutsa. Kunyanya, zvinetsekana kuti chimiro ichi chinoshanda icho chingori chinangwa chekudzivirira vashandisi kutanga iyo inoshanda system isiri Windows. Mune ino kesi, icho chinodikanwa chiri chikuru chekurambidzwa kune vashandisi, kwete chekuchengetedza chinhu.
Sekureva kweMicrosoft, kune maviri "anovimbisa" kuti izvi hazviitike. Kune rimwe divi, unogona kudzima vese UEFI (kuburikidza nebhutsu uchishandisa "BIOS inoenderana modhi", inozivikanwawo se "Legacy Boot") uye Yakachengeteka Boot. Kune rimwe divi, mvumo yekuti Secure Boot inoda siginicha yedhijitari inopihwa neakazvimiririra masimba, asiri iye anogadzira kana Microsoft.
Ichokwadi ndechekuti parizvino kugoverwa kweLinux kuri kungopa yavo matanho ekutanga kukwanisa kumhanya pamashini ane UEFI uye Yakachengeteka Boot inogoneswa.
Mune mamiriro azvino ezvinhu, zvakanakisa kudzima Yakachengeteka Boot usati waisa Linux. Tsigiro yeEFI, kune rumwe rutivi, inovandudzwa, kunyangwe ichine zvimwe zvikanganiso. Kana pane kukanganisa, hakuzovi neimwe nzira kunze kwekusarudza iyo "Legacy Boot" uye kudzima iyo UEFI.
Kuisirwa-bhutsu kweLinux padivi peWindows 8, iyo inoda kuti ishandiswe ese UEFI uye Yakachengeteka Boot, haina kukurudzirwa panguva ino. Parizvino, zvinongogoneka - kwete pasina mamwe musoro - uchishandisa izvo zvazvino vhezheni zvezvakakurumbira zvekugovera - verenga Ubuntu 12.10, Fedora 18, nezvimwe. zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Ungachinja sei marongero eBIOS kubhoot Linux kubva Live CD / USB
Ndatenda zvikuru nedzidziso, yakakwana kwazvo. Vazhinji vanoita zvakanaka.
Tsamba, kuona kana mumwe munhu anoziva zvakawanda achikurudzirwa uye anoita dzidziso yedzakasarudzika sarudzo dzatinogona kuwana dzekupokana nadzo mune bios, uye ndeipi yeumwe neumwe wavo.
Ndiri mumwe wevaya vanokukodzera. Ini ndinobatana neodha !!!
Pindura kuna suuus
mupiro wakanaka waive rubatsiro rwakakura
Pindura kuna cesarbogotano23
uye kana iri imac yekumisikidza kuti itange kubva cd?
Ichokwadi ndechekuti ini handina zano asi ini ndinofungidzira kuti zvakare rinokutendera iwe kupinda bios uye kuchinja izvo, handiti?
Pindura kuna Nebhukadhinezari
Ini handifunge kubhura linux inorarama cd pane yangu windows 8 pc
Ini handizive zvekuita, ndokumbirawo mundibatsirewo 🙁
Ziva kuti yakadzama mirayiridzo yekuti ungazviita sei inopihwa muchinyorwa.
Kana iyo BIOS yagadziriswa (sekutsanangurwa kwayakaitwa muchinyorwa) iwe unongofanirwa kuteedzera iyo linux distro kune iyo pendrive (uchishandisa unetbootin kana yakafanana) uye bhuti muchina nependrive munzvimbo.
Kuwanda kusingabatsiri "kujekeswa" - zvinoita sekunge anoda kuzviratidza "kuti anoziva zvakadii" uye neruzivo rwushoma uye ruzivo kuti atange live cd, sezvaakavimbisa uye aifarira kudzidza ... isu ticharamba tichitsvaga nzvimbo dzinowanikwa zvishoma nevashandisi vese ..
Iwe unofunga chii chinoshaikwa? Iwe unogona kuve wakanyanya kujekesa?
Iyo inyaya inogona kungogadziriswa nayo munzira yakajairika nekuti yega yega BIOS yakasiyana.
Kwazisai, nekutenda nemupiro, chete kuti zviri kukurumidzira kwandiri kuti ndiWin naKanaima vaiswe, sezvo ndichifanira kushanda nezvikumbiro izvo zvisati zvasimuka kuenda kuCanaima, ruzivo nderekuti kana ini ndichiedza kupinda muWin installer, iyo Kanaima inotangazve, ndakaudzwa Ini ndinofanira kushandura sarudzo mune bios, SATA kutonga ... asi hazviratidzike! Zvandinogona kuita ??
Ndichitsvaga ruzivo paRarama CD muGNU / Linux ini ndawana ruzivo rwandinoona rwuchinakidza kubvisa kusahadzika (kunyanya kune vatsva vakaita seni). Iri mune inotevera chinongedzo:
Ndatenda zvikuru nechinyorwa.
Mhoro! Ndatenda kwazvo neruzivo, ini ndariwana rakakwana kwazvo uye rinonzwisisika. ….
Tokuona gare gare kwaziso!
Pindura kuna Nona
Ndatenda zvikuru! Ini ndakashanda neLegacy Bios uye ndichiremadza iyo UEFI. Kugadzikana neCentOS7.
Mumwe munhu atoisa Linux pane dell inspiron neBios A05
Pindura kuna chaqui
Mumwe mubvunzo, kuisa linux pane diski, kubva kuUSb, unofanirwa kushandura bhuti disk (iyo usb pachinzvimbo chehard disk) kubva kune bios kana mune yangu nyaya kubva kuEFI, ini ndatoita shanduko dzese dzaidiwa uye ndaisa linux iyo Yakachengeteka UEFI yakarongedzwa kuitira kuti bhuti disk iri usb kana ichizoshandurwa kuita bhutsu neyakaomarara diski, nekuti ini zvakare ndine win 8 yakaiswa kubva kufekitori, uye ini ndinogona chete kupinda iyo UEFI kubva windows uye kugadzirisa zvese, zvakare, handizive linux iso (iyo yandiri kuda kuisa ndeye ubuntu 16.4.1) ichauya neiyo yakawanda-yekutanga, kusarudza kuti wotanga hwindo kana ubuntu
Enrique Romero akadaro
Ona… ndiri kuedza kuisa windows 7 kubva paUSb pane laptop ine UEFI Ini ndinopinda mairi uye ndinogadzira chishandiso chebhutsu kuwedzera mukuremadza iyo UEFI Boot uye nekugonesa iyo Nhaka bhuti. Iyo inonyatso gamuchira iyo usb ndangariro iyo iyo inoshanda sisitimu ine asi isingabhure kubva pairi chero nguva. Mune bhatani sarudzo hwindo ini ndinosarudza ndangariro uye inogara kwechinguva nekisiki nhema uye laptop inotangazve uye ini handina kukwanisa kutanga chirongwa chekumisikidza ... ndakaedzawo kugoverwa kweLinux, kwandisingakwanise kutaura kuti chii asi muzita tinogona kuwana chimwe chinhu senge Debia uye 4.1 yandakamboshandisa uye nekuisa pasina matambudziko pane mamwe makomputa. chokwadi ndechekuti mune iyi modhi yemalaptop ayo andakatosangana nawo akati wandei hazviite kuti nditange kubva kuCD yandagadzirisa nekuisa iyo yekushandisa system mune imwe yakafanana uye kupfuudza diski kune yekutanga asi ini ndoda kuziva kana paine nzira yekugadzirisa iyi diki Ndine dambudziko ... kana mumwe munhu achiziva kugadzirisa izvi uye otora dambudziko kuti averenge chirevo changu, ndinogona kuchikoshesa
Iyo "Bios" inoti pamusoro pePhoenix yakachengeteka
Pindura Enrique Romero
Mhoroi, ndatenga toshiba satllite NB10t-AF ine windows 8. Waranti yapera uye ndaedza kuisa ubuntu. Hazvibviri. Ndabvisa chinhu chakachengeteka chebhutsu ... ini ndaisa ubuntu kubva mudanga nezvikamu zvandaida .. Mhedzisiro. kana wapedza kuisa, reboot fine, ubuntu works. Ndinodzima. Ini ndinobatidza moto uye hauchafambi.
kutarisa kuvapo kwenhau- ...
hapana kuvapo kwenhau ...
(uyezve) reboot uye sarudza yakakodzera bhuti chishandiso kana kuisa boot midhiya mune yakasarudzwa boot mudziyo uye tinya kiyi
uye hazvibviri kubuda imomo.
kana ikaziva chinyoreso, ndinogona kushandisa mashandiro kubva peni, asi zvinoita sekunge hachichizive pane rakaomarara diski. chero mazano?
Pane mumwe munhu angandibatsira ini kuyedza kuisa linux canaima pane yangu pc nekuwina 7 uye kana ndichiisa canaima zvinoita «kutanga canaima» uye ini ndinopa ipapo uye mushure memasekondi mashoma iyo pc inotangazve zvakare? imwe mhinduro ndapota….
Kubiridzira "Iyo GLMatrix"